En I sii wakhti firaaqo waxaan aad u jecelnahay shineemada iyo muusigga, sidaa darteed iyagu waa diiraddayada ugu weyn ee fiirinta. Intaa waxaa sii dheer, waxaan wax ka qabannaa dhammaan noocyada xilligan iyo waqtiyadii hore, laga soo bilaabo shineemada dagaalka ee ugu caansan ilaa filimada superhero ee ugu dambeeyay.
Xagga muusigga, waxaan jecelnahay jazz, flamenco iyo muusigga punk. Maxaa isku jira, huh? Tan waxaa suurtogal ah oo kaliya mahadnaqaya annaga kooxda tifaftirka, kuwaas oo midba midka kale si fiican u dhammaystirayo si Dame Ocio looga dhigo goobta ugu buuxda ee ku hadasha Isbaanishka mowduucyadan.
Shineemada caadiga ah
Filimka sheekooyinka sayniska
Shineemo naxdin leh
Filimada taariikhiga ah
Riwaayado iyo xaflado
Soo dejiso muusikada
Sii deynta muusikada
Muusikada elektarooniga ah
Muusikada Birta Culus